Uru nke ite a na -eme mmemme | Bezzia
Uru nke programmable akụwa
Maria onyekwere | 12/10/2021 12:00 | Nri
Obere ngwa ha na -eme ka ọrụ anyị na -adị kwa ụbọchị dị mfe na ite a na -eme mmemme abụghịkwa otu. N'ihi ndụ dị ugbu a, a na -amanye anyị ime ọtụtụ ihe n'ime obere oge na ite a na -emebe eme ka anyị nwee ike idozi ụfọdụ ọrụ ụlọ. Mana gịnị bụ ite a na -eme mmemme?
1 Gịnị bụ ite a na -eme mmemme?
1.1 Ihe dị iche na ihe nrụpụta nri na ite ite
2 Uru nke ite a na -eme mmemme
Gịnị bụ ite a na -eme mmemme?
Rọbọt kichin, ite a na -eme mmemme, ndị na -esi nri ngwa ngwa ... Ọ bụ ezie na anyị na -echekarị echiche banyere ibe anyị ígwè ọrụ na kichin, ha abụghị otu.
Ite a na -eme mmemme bụ onye na -esi nri mgbali ọkụ. Nhazi ya yiri nke fryer miri emi: o nwere mkpuchi na akụkụ elu nke na -enye gị ohere itinye ihe mejupụtara ya, valvụ yiri nke efere ngwa ngwa ọdịnala, nke ha na -eicomi usoro ya na thermostat.
Ite ndị a na -eme mmemme nwekwara ogidi n'ihu na naanị ị ga -ahọrọ mmemme a chọrọ. Ha na -esi ofe, ighe, uzuoku, grill, bred ... ha na -emekwa ka ị mara mgbe emechara nri. Enwere ike ịme mmemme, yabụ ị nwere ike ịkwadebe nri n'oge ị họọrọ, dịka esi eme ya. Gịnị ma ọ bụrụ na ike apụ? Ị gaghị echegbu onwe gị: mgbe ọ ga -alọta, ọ ga -aga n'ihu ebe ọ kwụsịrị, ekele maka ncheta ya.
Ọtụtụ ite a na -eme mmemme nwekwara nhọrọ ikpo ọkụ na ikpo ọkụ, nke na -enye gị ohere ka ị ghara imerụ efere ndị ọzọ. Ọ na-abụkarị na ha nwere bọtịnụ awara awara iji mee nhicha onwe ha.
Ihe dị iche na ihe nrụpụta nri na ite ite
Kedu ihe dị iche n'etiti ngwa a na robot kichin? Mgbe ite a na -eme mmemme "solo" na -esi nri, robot kichin na -aga n'ihu, na -edozikwa nri. Ndị a bụ, n'ime robot kichin ị nwere ike iri, gwepịa ntụ ọka ... Ma gịnị banyere a Ite esi nri nwayọ? Anyị kwurịtara ụdị ite a ogologo oge gara aga; Ha bụ ite ọkụ mana ọ bụ ọkụ eletriki iji esi nri n'obere ọkụ.
Ndị na-esi ngwa ngwa na-ewekarị iwe
Uru nke ite a na -eme mmemme
N'ịmara njirimara nke ite a na -eme mmemme, ọ dị mfe ịkọ uru ọ na -enye anyị. Ọ bụrụ na ị na -esi nri ugboro ugboro mana ị nweghị nnukwu oge ma ọ bụ nwee mmasị imefu nnukwu ego, ihe ndị a bụ, enweghị mgbagha, ezigbo nhọrọ maka ebumnuche ndị a.
Ha dị mfe. Onye ọ bụla nwere ike iji ite a na -eme mmemme. Naanị ị ga -akwụnye ya, tinye ihe ndị mejupụtara ya, họrọ mmemme isi nri wee chere ka efere ahụ dị njikere.
Ha na -ebelata oge nri. Ị nwere ike esi nri otu ahụ na ite ọdịnala mana n'ime obere oge ebe ọ na -esi nri na nnukwu nrụgide. N'amaghị ama, ọ ga -esi nri gị ngwa ngwa.
Eri obere ume na ọkụ eletrik karịa ite a na -emebu. Site n'ibelata ọkụ enyere na oge nri, ị nwere ike chekwaa ihe ruru 70% n'ike, nke ga -emetụta ụgwọ ọkụ ọkụ gị nke ọma.
E nweghị ihe mere ha. Ite ite ndị a na -esi nri nwere teknụzụ nke na -eme ha nke ọma. Chefuo ihe ọkụ na -achọghị na ihe mere na kichin n'ihi oke nrụgide. Ha nwere sistemụ na -adọ gị aka na ntị ma ọ bụrụ na emechighị mkpuchi ahụ nke ọma yana ha nwere sistemụ mkpakọ, iji zere ọkụ mgbe ị na -emepe mkpuchi. na -agbanyụ mgbe emechara.
Ha na -enye gị ohere esi nri ihe niile. Ọtụtụ nwere mmemme isi nri dị iche iche: turbo, nrụgide, uzuoku, stew, ịchụ nta, confit, osikapa, pasta, griddle, fry, fry, oven ... tinyekwara n'ime igbe ahụ bụ akwụkwọ nwere ọtụtụ echiche maka otu esi akwadebe menu izu ụka gị. dị mfe. Nọdụ ala maka nkeji iri na Sọnde ọ bụla, nweta echiche iji kwadebe menu maka izu ahụ dum wee chefuo ịjụ onwe gị kwa ụbọchị ihe ị ga -esi nri n'echi ya.
Ị na -ahụ ite ndị a na -eme mmemme dị mma itinye ego maka kichin gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Nri » Uru nke programmable akụwa
Sagrada Familia: Usoro Spanish Netflix ọhụrụ